लण्डनको आकाशमा झण्डै जुधेका दुई... :: चेतना गुरागाईं :: Setopati
लण्डनको आकाशमा झण्डै जुधेका दुई विमान!
काठमाडौँ, असोज २ (सेतोपाटी)
आकाशमा सयौं यात्रु बोकेर उडिरहेका विमान एकअर्काको एकदमै नजिक पुगे कस्तो होला?
कल्पना गर्दा पनि मुटु चिसो हुने यस्तै घटना गत अगस्ट १५ मा लण्डनको हिथरो विमानस्थलमा भएको थियो। त्यहाँ अवतरण हुन लागेका दुई विमान एकआपसमा यति नजिक थिए, ती एकमाथि अर्को टाँसिएरै उडेझैं देखिएका थिए।
करिब एक महिनाअघि दुई विशाल विमान एकअर्का माथि यसरी उड्दा कसैलाई किन थाहा भएन? खासमा त्यो क्षणको तस्बिर सार्वजनिक नभएको भए यसबारे अहिले पनि कसैलाई थाहा हुन्न थियो।
डेलीमेलमा प्रकाशित समाचारअनुसार एक महिनाअघिको यो घटना सर्रेको बाइफ्ल्टिस्थित आफ्नो बगैंचामा बसिरहेका क्रिस हाइनले खिचेका तस्बिरका कारण बाहिर आएको हो। ७० वर्षीय हाइनले बगै‌ंचामा बसिरहेका बेला यस्तो दृश्य देखेपछि आफ्नो क्यामरामा कैद गरेका थिए।
‘म प्रायः मेरो बगैंचामा बसेर हिथरो विमानस्थलमा अवतरण गर्न लागेका विमानहरु घुमेको र लाइन लागेको हेरिरहन्छु। यस्तै क्रममा त्यो दिन दुई विमानले मेरो ध्यान धेरै नै खिचे,’ अवकाश प्राप्त इन्जिनियर हाइनले डेलीमेलसँग कुरा गर्दै भनेका छन्, ‘ती विमान सामान्यभन्दा निकै नजिक थिए। मलाई अचम्म लाग्यो र, हत्तपत्त क्यामरा झिकें।’
उनले क्यामराबाट जूम गरेर हेर्दा ती विमान भर्जिन एटलान्टिक ए ३४० र ब्रिटिश एयरवेज ७८७ ड्रिमलाइनर भएको बताएका छन्।
[caption id="" align="alignleft" width="306"] क्रिश हाइन।[/caption]
‘तिनले एक चक्कर मारेपछि फेरि अर्को चक्कर लगाए। चक्कर लाउँदा उनीहरुले एकअकालाई पार गरेका थिए। यहींनिर ती विमान यति नजिक भए, लाग्थ्यो एकको माथि नै अर्को बसेको छ,’ विमान अवतरणमा देखेको दृश्यको अनुभव सुनाउँदै हाइनले भनेका छन्, ‘यो मात्र केही सेकेण्डको दृश्य थियो। तर, यसले मुटु नै कमाइदियो।’
उनले यो तस्बिर अगस्ट १५ का दिन दिउँसो ३ बजे लिएका थिए। उनी भन्छन्, ‘यी विमान यति नजिक थिए, यात्रुले समेत अनुभव गरे होलान्। मैले पछि तस्बिर हेर्दा पो देखें, यो कति जोखिमपूर्ण थियो।’
डेलीमेलका अनुसार भर्जिन एयरबसले ३११ जना र ड्रिमलाइनरले २१४ जनासम्म यात्रु बोक्छ। यति धेरै सम्भावित यात्रु बोकेका यी दुई विमान भाग्यवश दुर्घटनाबाट जोगिएका हुनसक्ने बताइएको छ।
बेलायती उड्डयन परामर्शदाता जोन हचिनसनले भने यो सोचे जस्तो भयानक नभएको बताएका छन्। ‘दुई विमान यति नजिक देखिएपनि तिनीहरुबीच कम्तीमा एक हजार फिटको दूरी भएको अनुमान गर्न सकिन्छ,’ हचिनसनले भने, ‘कुनै पनि विमानको तीक्ष्ण अलर्ट सिस्टम हुन्छ जसले अर्को विमान नजिक आउँदा चेतावनी सूचना दिन्छ। साथै एयर ट्राफिक कन्ट्रोलबाट पनि निगरानी हुने भएकाले विमानहरु यसै ठोक्किहाल्ने अवस्था भने कमै हुन्छ।’
हिथरो विमानस्थल स‌ंसारकै व्यस्तमध्ये एक हो। सरकारले यहाँ थप धावनमार्ग बनाउने प्रतिबद्धता गरेपनि स्थानीयका कारण अवरोध हुँदै आएको डेलीमेलले जनाएको छ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, असोज २, २०७४, ०७:५९:१६